Akụkọ Bible: Agwọ Ọla Kọpa - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
IHE a a gbakụrụ n’osisi a ò yiri ezigbo agwọ? Ọ bụghị ezigbo agwọ. E ji ọla kọpa mee ya. Jehova gwara Mozis ka ọ gbakụọ ya n’osisi ka ndị mmadụ nwee ike ile ya anya wee dị ndụ. Ma agwọ ndị nke ọzọ ahụ dị n’ala bụ ezigbo agwọ. Ha atawo ụmụ Izrel ma kpatara ha ọrịa. Ị̀ ma ihe mere agwọ ji na-ata ha?
Ọ bụ n’ihi na ụmụ Izrel kwuru okwu megide Chineke na Mozis. Ha mere mkpesa, sị: ‘Gịnị mere unu ji si n’Ijipt kpọpụta anyị ka anyị nwụọ n’ọzara nke a? Ihe oriri ma ọ bụ mmiri adịghị n’ebe a. Anyị apụghị iri mana nke a ọzọ.’
Ma mana ahụ bụ ezigbo nri. Jehova nyere ha mana n’ụzọ ọrụ ebube. O nyekwara ha mmiri n’ụzọ ọrụ ebube. Ma ụmụ Izrel enweghị ekele maka ụzọ Chineke si lekọta ha. N’ihi ya, Jehova zitere agwọ ọjọọ ndị a iji nye ndị Izrel ahụhụ. Agwọ ndị a tara ha, ọtụtụ n’ime ha wee nwụọ.
N’ikpeazụ, ha bịakwutere Mozis wee sị ya: ‘Anyị emehiewo n’ihi na anyị ekwuwo okwu megide gị na Jehova. Ugbu a, biko rịọ Jehova ka o wepụ agwọ ọjọọ ndị a.’
Mozis wee kpechitere ha ekpere. Jehova wee gwa Mozis ka o mee agwọ ọla kọpa nke a. Ọ gwara ya ka ọ gbakụkọ ya n’elu osisi, nakwa na onye ọ bụla agwọ tara kwesịrị ile agwọ ọla kọpa ahụ anya. Mozis mere dị ka Chineke kwuru. Ndị agwọ tara lekwara agwọ ọla kọpa ahụ anya, ahụ́ wee dị ha mma.
Ọ dị ihe nke a na-akụziri anyị. N’ụzọ ụfọdụ, anyị niile yiri ndị Izrel ahụ agwọ ndị ahụ tara. Anyị niile nọ n’ọnọdụ nke ịnwụ anwụ. Legharịa anya, ị ga-ahụ na ụmụ mmadụ na-aka nká, na-arịa ọrịa, na-anwụkwa anwụ. Ihe mere o ji dị otú ahụ bụ na nwoke na nwaanyị mbụ bụ́ Adam na Iv gbakụtara Jehova azụ, anyị niile bụkwa ụmụ ha. Ma Jehova emewo otu ụzọ nke anyị pụrụ isi dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
Jehova zitere Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst n’ụwa. A kpọgidere Jizọs n’elu osisi, n’ihi na ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ajọ mmadụ. Ma Jehova zitere Jizọs ịzọpụta anyị. Ọ bụrụ na anyị elegide ya anya, ọ bụrụkwa na anyị na-eso ya, mgbe ahụ, anyị pụrụ inwe ndụ ebighị ebi. Ma anyị ga-amụkwu ihe banyere nke a ma e mesịa.
Ọnụ Ọgụgụ 21:4-9; Jọn 3:14, 15.
Na foto a, gịnị bụ ihe a a gbakụrụ n’osisi, n’ihi gịnịkwa ka Jehova ji gwa Mozis ka ọ gbakụọ ya n’ebe ahụ?
Olee otú ụmụ Izrel si gosi na ha enweghị ekele maka ihe niile Chineke meere ha?
Gịnị ka ụmụ Izrel gwara Mozis ka o mee mgbe Jehova zigasịrị agwọ ọjọọ iji taa ha ahụhụ?
N’ihi gịnị ka Jehova ji gwa Mozis ka o mee agwọ ọla kọpa?
Gịnị ka anyị pụrụ ịmụta site n’akụkọ a?
Gụọ Ọnụ Ọgụgụ 21:4-9.
Olee otú mkpesa ụmụ Izrel mere banyere ihe ndị Jehova nyere ha si bụrụ ihe ịdọ aka ná ntị nye anyị? (Ọnụ Ọgụ. 21:5, 6; Rom 2:4)
Olee ihe ụmụ Izrel ji agwọ ọla kọpa ahụ mee ọtụtụ narị afọ ka e mesịrị, gịnịkwa ka Eze Hezekaya mere? (Ọnụ Ọgụ. 21:9; 2 Eze 18:1-4)
Gụọ Jọn 3:14, 15.
Olee otú ịgbakụ agwọ ọla kọpa ahụ n’osisi e ji mere ihe nnọchianya si see onyinyo mkpọgide a kpọgidere Jizọs Kraịst n’osisi? (Gal. 3:13; 1 Pita 2:24)